Seenaa Gabaabaa Hundeeffamaa fi Sadarkaa Guddina Waltajjii Leenjjii Poolisii Oromiyaa Hardhaa
Haala Baruumsaa fi Leenjii Bara 1985 dura ture
Barumsaa fi Leenjii Bara 1985 dura
Akkuma Mootummaan sirni Dargii aangoo irraa bara 1983 A.L.I kufeen booda biyyii keenya mootummaa cee’umsaa hundeesuudhaan bulchiinsa feedaraalizimii sabaa fi sab-lamoonnii, ummatoota Itiyoophiyaa bulchiinsa mootummaa isaanii hundeeffatani ofiin of- bulchu calqabuu isaanii tiin bifa haaraa ta’een, hundeeffamnii fi jiraachuun qaama nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneesu barbaachaa ta’ee argame. kana ta’uu isaatiinis, labsiin lakki.8/1984 waa’ee boobbii ittisaa biyyaa fi poolisii naannoolee ittin dhaabuun danda’amu mootumma cee’umsaa tiin bahee hojiirra akka oolu ta’e.
Bu’uruma kanaan Naannon keenya Oromiyaanis, humna Poolisii isaa ijaaruun barbaachisaa fi dirqama waan ta’eef, yoo xiqqaate sadarkaa naannootti jiraachuun dhaabbata leenjii poolisii tokko murteessaa ta’ee argame. Yeroo sanatti barbaachisummaan hundeeffama mana leenjii poolisii hubatamus dhimma kana gara hojii qabatamaatti jijjiiruuf haalli ture salphaa akka hin turin seena darbe ni yaadatama.
Hanga manni leenjii jiddu galaa ta’ee tokko hundeeffamutti callisanii ta’uun dhimma hin danda’amne waan ta’eef moo humna nageenya baayyee murteessoo ta’e kan bifa haaraan ijaruuf moo sadarkaa sadarkaa sadarkaan sochiin taasifamaa turuu isaa namootaa hojii san keessa turanirraa hubachuun danda’ameera.
Haala Baruumsaa fi Leenjii ...
Humna nageenyaa naannoon Oromiyaa bifa haaraan ijaaruuf Sochiiiwwan turan keeessaa, miseensoota poolisii muraasa sirna duraaniirraa garanatti ce’anii fi miseensoota haarawaa hirmaannaa uummataa tiin bakka jireenya isaniirra filatamaniif leenjiin guyyoota 15 hin caallee godinuma godina isaanii irratti kennameefii hojiirratti akka bobba’an taasifamaa kan turame ta’uu akka fakkeenyatti kaasuun ni danda’ama. Gama biraa tiin leenjiin haala kanaan kennamu kun rakkoo yeroof jiru hiikuuf yaa gargaaru malee ga’umsa kan hin qabnee fi kunumtuu bifa walfakkaatuun godina hundarratti bifa walfakkaatuun kennamaa kan hin turre ta’uu hubatamee hanqinaalee humni kun erga hojiirratti bobba’ee muldhachaa turan hambisuuf dirqama mana ykn dhaabbata leenjii tokko yoo xiqqaate sadarkaa naannootti qabaachuun barbaachisaa fi dhimma filannoo hin qabne ta’ee argame. Leenjiwwan godina godinarratti yeroo muraasaaf kennamaa turaniin hanqinaalee hojiirratti muldhachaa turanis hanbisuuf leenjiin haala kanaan kennamaa turan irra deebi’uudhaan manneen leenjii poolisii hunda’u keessatti kennamuu akka qaban haalli raawwii ture argisiisaa dhufe. Bu’uruma kanaan bara 1984 keessa Waltajjiiwwan Leenjii Poolisii Oromiyaa iddoo lamatti Magaalaa Adaamaa iddoo amma Jidduu Gallii Leenjii Komishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa itti gaggeeffamaa jiruu fi Magaalaa Jimmaa, iddoo amma Waajjirri Qajeelcha Poolisii Godina Jimmaa itti argamutti] hundaa’anii hojii isaanii akka eegalan ta’e. Leenjiwwan godinaaleerratti guyyaa muraasaaf kennamaa turanis manneen leenjiii akka haaraa fi yeroo duraa tiif Adaamaa fi Jimmaatti hundeeffaman kan keessatti leenjiin cimsannaa humnaa baatii tokkof irra deebiin akka kennamu ta’ee, yeroo duratiif akka leenjii marsaa 1ffaattii lakkaawwamnii eebbisiisuun danda’ameera.
Baruumsaa fi Leenjii
Haala Baruumsaa fi Leenjii Bara 1985 Booda Jiruu fi Hundeeffama Waltajjii Leenjii Poolisii Oromiyaa [Sanqallee]
Hojiiwwan leenjiii poolisii iddoo lamatti eegalamee ture kun immoo humna barsiisaa, lenjisaa akkasumas haalli leenjii iddoo lamatti gaggeessuu rakkisaa ta’ee argamuu isaa tiin bara 1985 Ji’a Muddee keessa leenjiwwan iddoo lamatti kennamaa turan kun iddoo tokkootti gara Godina Shawaa Lixaa Amboo iddoo addaa Sanqalleetti akka galu taasifamee jira.
Waltajjiin Leenjii poolisii Oromiyaa Sanqallee tti yeroo hundeeffamu hojii isaa kan calqabe , manneen leenjii Jimmaa fi Adamaa irraa walitti dhufaniin humna namaa 118 yoo ta’u, kana keessaas barsiisoota 9,leenjistoota dirree 18, hojjataa deggeersaa 91 fi lojistiksii koonkolaataa lamaa fi mannen moofaa duraan Sanqallee keessatti argaman qabachuudhaan yeroo duraatiif leenjii poolisummaa bara 1985 marsaa 3ffaa irraa eegalee kennuu akka calqabameedha.
Yeroo kanatti manni leenjichaa Hogganaa 1, itti gaafatamtoota kutaalee 7 itti waamamni isaanii hogganaa waltajjichaaf ta’ani fi kutaa xiqqaa 5 tiin kan caaseeffame ta’uun isa seenaa ture irra hubachun danda’ameera.
Caasseeffamni kunis hanga hundeffama Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti yeroo adda addaa kan jijjiramaa ture yoo ta’u yeroo Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa hundeeffamuu Waltajjiin leenjii poolisii Oromiyaa akka adeemsaa tokkotti maqaa isa duraan ture kana fooyyeessuudhaan Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti Waltajjii leenjii idilee fi ogummaa poolisii ta’ee dhaabbatee jira.
Waltajjiin Leenjii Poolisii Oromiyaa Sanqalleen leenjiiwwan adda addaa marsaa 3ffaa irraa eegalee hanga bara kanaatti yeroo 24ffaaf kan kennaman yoo ta’uu, Jidduu jidduutti baay’inni ummata Naannicha, sochiwwan dinagdee fi hawaasummaa yeroodhaa gara yerootti daran guddataa dhufeen barbaachisummaan tajaajila poolisii akka dabalaa deemu taasiisaa tureera. Mootummaan barbaachisummaa fi fedhii tajaajila humna nageenyaa dabalaa dhufe kana keessumeessudhaaf yeroo tokkotti humna poolisii baay’ee leenjisee baasuuf dandeettiin simannaa mana leenjii Sanqallee waan hin dandeenyeef leenjiwwan poolisii idilee marsaa ;14ffaa, 16ffaa,17ffaa, fi 20ffaa, manneen leenjii ergisaa Ittiisa Biyyaa kan akkaa:-
Laga- Daadhii fi
Xoollaay jedhamanitti akka kennamuu ta’eera.
Waltajjii Lenjii Poolisii Oromiyaa Gara Kolleejjiitti Guddisuuf sochii taasifamee fi Seenaa Gabaabaa Hundeeffama Kolleejjii Poolisii Oromiyaa
Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Kolleejjummaan akka dhaabbatu ka’umsi isaa fedhiin tajajila poolisii dabalaa waan dhuufeef humna poolisii naanichaa leenjii fi barumsa isaa sadarka ol’aanatti ol-guddisuu fi leenjii geggeessummaa sadarkaa adda addaatti kennuudhaaf akka naannootti kolleejjii poolisii tokko hundeessuun murteessaa ta’ee waan argameef sochiin adda addaa taasifamaa turee, calqaba bara 2001 keessa iddoon Kolleejjichi itti hundeeffamu filatamee dhaabbata guddisa daa’immanii, bakka “NACID” (ናሕማልድ) jedhamee waamamutii wal harkaa fuudhinsi 13 /02/ 2001 taasifamee dhakaan bu’uraaPireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa yeroo sanaa kan turaniin kabajamoo Abbaa Duulaa Gammaadaa tiin gaafa 18/08/2001 ADAAMAA tti taa’eera.Sochii sana booda taasifameenis dambii lakkofsa 129/2002 tiin Dhabbata Barnootaa fi Leenjii ol’aanaa qaama seerummaa qabu ta’ee hundaa’eera. Bu’uurumaa kanaan kolleejjiichi mana leenjii poolisii idilee fi oggumma Sanqalleetti argamu of-jalatti haammachuudhaan itti waamamni isaas komishiinii Poolisii Oromiyaatiif ta’ee, ol’aantummaadhaan boordiidhaan akka buluu danbiichaan murta’eera.